News - Warshad cusub oo la aasaasay
Deqing Yuebang Glass Co., Ltd. ayaa bilaabay dhismaha warshadan cusub, oo la filayo in la soo gabagabeeyo bisha Diseembar 2021. Warshadda cusub waxay ku fadhidaa dhul dhan 15,000 oo mitir murabac ah.waxaana ku jira laba dabaq oo aqoon isweydaarsi ah iyo afar dabaq oo xafiiska ah.
Ka dib marka warshadda cusub la aasaaso, waxaannu ku dari doonnaa 1more oo xarig ah wax soo saarka muraayadda, 2 albaab oo khadadka wax soo saarka ah iyo 10pcs khadadka extrusion. awooda waxaa lagu kordhin karaa 2 jeer. Oo waxaan samayn doonnaa waaxda cilmi-baarista iyo horumarinta, cilmi-baaris madax-bannaan iyo horumarinta albaabbada muraayadaha silsiladda qabow.
Deqing Yuebang Glass Co., Ltd waa soo saare kaas oo in ka badan 15 sano khibrad u leh arimahan kuna takhasusay naqshadeynta iyo soo saarista dhammaan noocyada meheradda qaboojiyaha / dhalooyinka qaboojiyaha, albaabka muraayadaha iyo astaanta caagagga. Muraayadeena waxaa ka mid ah 3 ~ 6mm muraayad qalooca, 3 ~ 12mm galaas fidsan, 3 ~ 6mm muraayad yar oo E ah, 3 ~ 4mm muraayad yar oo E ah, muraayad ITO ah, muraayad qabow, muraayad daabacan oo xariir ah, galaaska kululaynta. Iwm
Albaabkeena muraayadda ah waxaa ka mid ah albaabka muraayadda muraayadda caagga ah, albaabka aluminium aluminium ah, albaabka muraayadda muraayadda ah ee ABS, muraayadaha muraayadda labanlaaban, muraayadda saddexda ah, albaabka muraayadda yar ee E, albaabka muraayadaha kululaynta
Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyay Canada, America, Australia, Japan, Thailand, Dubai, Malaysia, Saudi Arabia, iwm, jawaab wanaagsan macaamiisheena. Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa macaamil kasta oo ka socda adduunka oo dhan inuu na soo booqdo oo uu dhiso iskaashi wanaagsan oo deggan.
Waqtiga boostada: Mar-22-2021